Yakazara Samsung Galaxy Note 20 chaiyo inodonhedza inoburitsa foni haisi kuzova ne 120Hz yekuvandudza chiyero chekuratidzira
Tave nemavhiki maviri chaiwo kubva paSamsung inotevera Galaxy Chiitiko uye zvishandiso zvishanu zvavari kuvhura zvinoramba zvichidonha online. Kunyangwe isu tichiziva kuti zvishanu zvishanu zvichaziviswa, chaizvo izvo zvishanu zvishandiso zvicharatidzwa pachiitiko zvichiri zvekupokana, kunyange isu tichigona kutonga zvakachengeteka Galaxy Z Flip 5G sezvo ichangobva kuziviswa mangwanani ano. Chinhu chimwe chatinoziva… [Verenga zvakawanda ...] nezve Yakazara Samsung Galaxy Cherechedzo 20 kuburitsa kunoratidza kuti foni haizove ne120Hz yekuvandudza mwero kuratidza
Chiitiko cheSamsung chisina kuburitswa chakatemerwa kutanga kwaNyamavhuvhu, uye sewachiwachi, kwave nekuburitswa kwekurasa kweyakajairwa Galaxy Note 20, inotarisirwa kuzarurwa panguva yekuratidzwa. WinFuture yakaburitsa iwo mafekitori. Saiti ino zvakare ichangoburitsa specs kune hombe, iri kuuya Galaxy Note 20 Ultra. Yakati iyo Galaxy Note 20 ichave ne6.7-inch, 1080p kuratidza ine 60Hz… [Verenga zvakawanda ...] nezveZvekupedzisira Samsung Galaxy Cherechedzo 20 kudonhedza ndeye spec yekurasa inoratidzira akakosha maficha